Shanduro yakabatsirwa nemakomputa. Vhura sosi maturusi | Linux Vakapindwa muropa
Shanduro yakabatsirwa nemakomputa. Zvimwe zvakavhurika sosi maturusi
Panguva iyoyo de kunyora chinyorwa kubva kune mumwe mutauro uchienda kune mumwe, vashanduri vane hunyanzvi kana veamateur vanowana mairikune tekinoroji mubatsiri anovimbikauye. Kana iri vasiri-nyanzvi vanowanzoenda kumichina yekushandura michina Mhedzisiro yacho haina kukwana zvakakwana, asi izvo zvinowanzo kwana kuti unzwisise zvinoreva rugwaro kana kunzwisiswa mukutaurirana. Tiri kutaura nezve masevhisi senge Deepl Kana vashanduri veBing neGoogle.
Mapurogiramu anobatsira pakomputa, inozivikanwa zvakare seTAC zvirongwa, zvishandiso zvinobatsira vashanduri uye nyanzvi dzemitauro kushandura zvinyorwa mune mumwe mutauro.
Ndiwo ipapo musiyano mukuru nemasaini ekushandura muchina, makomputa-anobatsira ekushandura zvirongwa zvinobatsira vanhu kushandura zvinyorwa uye chengetedza dhatabhesi reusable yemazwi, zvirevo uye zvakafanana mune mimwe mitauro.
1 Zvikamu zvechirongwa chekushandurwa nekombuta
1.1 Rudzi urwu rwechirongwa runoshanda
2 Zvimwe zvakavhurika sosi maturusi
2.3 Inowanikwa munzvimbo
Zvikamu zvechirongwa chekushandurwa nekombuta
Shanduro yekurangarira: Mhedziso yakakwana uye zvakafanana nezvayo mune mimwe mitauro zvinochengetwa ipapo.
Chitoro cheShoko: Mazwi mamwechete uye dudziro yawo mune mimwe mitauro anoponeswa.
Duramazwi: Sevha mazwi, chirevo chawo, nzira chaiyo yekuanyora uye neakafananidza.
Injini yekushandura otomatiki: Iyo inobvumira kuchengetedza basa rehunyanzvi hwevanhu.
Rudzi urwu rwechirongwa runoshanda
Computer-yakabatsirwa shanduro software kamura zvirimo muzvikamu zvidiki ezvinyorwa maererano mitemo inogadzwa nemushanduri ane hunyanzvi. Izvi zvikamu inofananidzwa nezvikamu zvakachengetedzwa zvinyorwas kare mundangariro yekushandura.
Mimwe yemhando ina dzemhedzisiro inotsvaga:
Paunowana mutambo unoiswa mundima yekushandura.
Muchiitiko chekusaiwana, chirongwa ichi chinogona kupa mamwe mazanocias kana tendera nyanzvi muturikiri online database yekutsvaga.
Nguva dzese chikamu chitsva chakashandurwa chinogadzirwa, chinochengetwa mundangariro dzekushandura.
Pakupedzisira, zvinyorwa zvakashandurwa zvinogona kuchengetwa nenzira dzakasiyana.
Zvimwe zvakavhurika sosi maturusi
Es chinhu Dudziro yakanyorwa muJava kuti igone kushandiswa paWindows, Linux kana macOS. Iyo yakapusa interface inoita kuti zvive nyore kushandura magwaro akaomarara.
Shanda nemafaira akawanda mune akawanda mafomati.
Iyo isina muganho nhamba yekushandura ndangariro, glossaries uye maduramazwi anogona kubvunzwa panguva imwe chete.
Vashandisi vanogona kugadzirisa mafaira ekuwedzera uye encodings.
Chikamu chakanangana nemutauro, fomati fomati uye kutaura kwakajairika.
Pamhepo mashini ekushandura masevhisi anogona kuwanikwa.
Ndicho chishandiso , que inokutendera kuti uise pfungwa pabasa rekushandura. Inogona kushandiswa kushandura, kuverenga, kushandura, kuongorora uye kugadzirisa zvinyorwa. Inosanganisira zvinhu zvine simba zvinobatsira kushandura nenzira kwayo uye nekukurumidza. Zvakare, ine yakachena mushandisi interface, izvo zvinoita kuti zvive nyore kushandisa.
Yakareruka uye inonzwisisika dhizaini.
Kuona zvakataurwa nevamwe vashanduri.
Kutarisa zviperengo mune zvese zvepakutanga uye zvinyorwa zvakashandurwa.
Inogona kushandiswa pazvikwiriso zvidiki.
Tsigiro yemafaira akawanda emafaira.
Kurumidza uye nyore kufamba mukati mefaira.
Software izvo zvinofadza yemahara software mahedheni. Yakagadzirwa uye inochengetwa neiyo KDE chirongwa, ikombuta-yakabatsirwa dudziro sisitimu iyo iwe yaunogona kushandura iyo OpenDocument mafaera (* .odt). Chirongwa chinoburitsa chinyorwa kuti chishandurwe uye kuchishandura chive chimiro che .xliff. Kana ichinge yashandurwa, inoichengetedza zvakare mu .odt fomati.
.Xliff (XML Yemunharaunda Inotsinhana Fomati Fomati) ndeye XML-yakavakirwa fomati yakagadzirirwa kuva muyero wemabasa ekushandura software. Kushandiswa kwaro kwakatenderwa neSangano reKufambira Mberi kweiyo Yakarongeka Ruzivo Mazinga. Yepasi rese isingabatsiri purofiti iyo yakanangana nekusimudzira, kusangana uye kutorwa kwe e-commerce uye webhu zviyero.
Yakakura yekugadzirisa maficha.
Kuchinja-chinja mugwaro kufamba.
Syntax yekutarisa kugona.
Statistics kuunganidza basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Shanduro yakabatsirwa nemakomputa. Zvimwe zvakavhurika sosi maturusi
Kugadzirwa kwemagwaro ekudzidzisa uchishandisa mahara uye yakavhurika sosi software